I-Fortnite iya kuba yinto ekhethekileyo kwi-Galaxy Note 9 kwinyanga yokuqala | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Fortnite, Imidlalo ye-Android, Samsung
I-Fortnite yenye yezona midlalo zilindelwe ngabasebenzisi kwi-Android. Nangona kunjalo, sisalinde ukuba ikhutshwe ngokusemthethweni kwiVenkile yokuDlala. Ukuqaliswa kwayo kubonakala kusondele kakhulu, ubuncinci ngokwamahemuhemu amva nje. Kuba kusithiwa inokufika ngeGlass Qaphela 9. Ngapha koko, ngenyanga yayo yokuqala kwintengiso, iya kuba yinto ekhethekileyo kwifowuni ye-Samsung.
Isivumelwano asinamdla kangako kodwa iya kuvelisa uninzi lwengqwalaselo kwiGlass Qaphela 9 kunye nokufika kweFortnite kwizixhobo ze-Android. Ke omabini amaqela angazuza kwesi sivumelwano.
Nangona ludaba olungaqinisekiswanga ukuza kuthi ga ngoku. Nje ukuba iGlass Note 9 isungulwe kwintengiso, icwangciselwe ukuphela kuka-Agasti, abasebenzisi ngesixhobo seSamsung Banokukhuphela iFortnite emnxebeni. Kuphela kwabo.
Nje ukuba iintsuku zokuqala ezingamashumi amathathu zidlule, apho kuya kubakho kuphela isiphelo esitsha sophawu lwesiKorea, I-Fortnite iya kufumaneka njengesiqhelo kwiVenkile yokudlala. Ke bonke abasebenzisi abanefowuni ye-Android banokufumana umdlalo owaziwayo.
Kwakhona, ukunyusa akupheleli apho. Kungenxa yokuba kuthiwe bonke abasebenzisi abathenga i-Galaxy Note 9 ingafumana phakathi kwe- $ 100 kunye ne- $ 150 yeV-Bucks, Imali esetyenzisiweyo kumdlalo, ukuze bakwazi ukuwachitha eFortnite. Iya kuba yindlela yokufumana umdla kunye nomnqweno wokudlala kubathengi.
Le ngcamango, nangona izwakala iphambene, iyavakala. Kuba kubonakala ngathi i-Galaxy Qaphela i-9 iya kuba siselfowuni enkulu yokudlala, enkosi kumandla ayo, kunye neempawu ezintsha eziza kwi-S-Pen. Ke ayizukuphambana ukufika kuka-Fortnite kwi-Android ukuya ngale ndlela. Kuya kufuneka silinde isiqinisekiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » I-Fortnite ye-Android iza kuza kuphela kwi-Samsung Galaxy Note 9
Ngoku ungabelana ngamabali e-Instagram naye nabani na omfunayo ngesitikha esitsha